ब्लग Archives - Naya Pusta
रोमाञ्चक दलीय तालमेल : झापाले जोगाउनेछ राप्रपाको राजनीतिक ‘करिअर’
Naya Pusta November 5, 2017 November 5, 2017 Special News, ब्लग, राजनीति
नयाँ पुस्ता संवाददाता । झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा देखिएको रोमाञ्चक दलीय तालमेलले राजनीतिमा एक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ। यो तालमेलले राप्रपा पुनः विभाजन तर्फ जान्छ या सरकारबाट बाहिरीन्छ भन्ने प्रश्नहरु समेत पैदा भएका छन्। वाम गठबन्धमा सहभागी नभएर उपप्रधानमन्त्री सहित केही मन्त्री पदका लागि सरकारमा सहभागी भएको
उनी ठकुरी म दलित जात मिलेन !
Naya Pusta August 14, 2017 August 14, 2017 ब्लग
अन्य समुदाय बाट अछुत र पछाडी पारियको जाती, जसलाइ समाज ले नै नराम्रो नजर ले हेर्छ । त्यही जात हो दलित, जुन सुन्ने बितिकै समाजका गनियका ठुलो जाती मानियका अछुत सम्झन्छन।व्यवहार गर्छन। त्यहिअछुत भित्र म पनि पर्छु। सानै थिय घर को गोठालो गर्थे साथै अध्यनन पनि बाबा आमा पनि खेती
रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका एक युवकले प्रमुखलाई खाडी मुलुकबाट खुला पत्र !
Naya Pusta July 16, 2017 ब्लग
चोम बिष्ट लुङग्री गाउँपालिका प्रमुख ज्युमा खाडीमुलुक मरुभूमि देश कतारबाट म चोम बिष्टको नमस्कार ! अहिले वर्तमान सन्दर्भमा २० वर्ष पछि मात्र हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । साथै लुङग्री गाउँपालिकामा रहेको सात ओटा वडा त्यसैगरी साबीकको पाँच ओटा गाबिसको एउटा गाउँपालिका रहेको छ । जसको प्रमुखको रूपमा हजुरलाई
बाबा र ममीले यौनसम्पर्क गरेको प्राय: थाहा पाइरहन्छु, तर थाहा नपाएजस्तै गर्छु
Naya Pusta July 3, 2017 ब्लग
निथ्या मेनन काठमाडौँ । बाबा र ममीको यौनसम्पर्क गरिरहेको प्राय थाहा पाइरहन्छु कुनैबेला त देखेरपनि नदेखे जस्तो गर्नुपर्छ । जसको कारण मेरो मनमा उहाँहरु प्रति नराम्रो छाप बसेको छ । यसले गर्दा मलाई दिक्दार लाग्न थालेको छ । यो परिस्थितिमा म कसरी सफलता हासिल गर्नसक्छु ? कतिपय परिवारमा अभिभावकहरु बीचको यस्तो यौन
९ वटा स्कुललाई यी विभिन्न विषयका २४ जना शिक्षकको आवश्यकता
Naya Pusta June 2, 2017 June 2, 2017 ब्लग
24 TEACHERS WANTED for9different schools. SECONDARY LEVEL: for Social Stds, Maths, Science, English, Nepali LOWER SEC LEVEL: for OBT, English, Maths PRIMARY LEVEL: Science, Maths, Nepali Play Group: Grade Teachers and Assistant Grade Teachers JOB LOCATION: nearby Baneswor, Syambhu, Thapathali, Maharajgunj. (All other subjects teacher can also contact for future reference ................................................................... Marketing Officers, ACCOUNTANT's, RECEPTIONIST's,
मार्केटिंग अफिसरको आवश्यकता, तलब ९-१७ हजार सम्म
Marketing and Sales Executives WANTED In 16 different companies (small to large) including Ad Agencies, Corporate companies, Finance Companies, Department Stores etc) Gross Salary: 9,000 to 17,000 (For Junior Executives-min. SLC) Gross Salary: 15,000 to 34,000 (For Senior Executives-min Bachelor complete) Job Location: near Maharajgunj, Putalisadak, Baneswor, New Road. Should have bike license. Those having 2
स्तन क्यान्सर जितेकी नर्स तारा पोखरेलको सुजातालाई खुला पत्र
Naya Pusta November 7, 2016 November 7, 2016 ब्लग, विचार
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेललाई १० महिनाअघि स्तन क्यान्सर देखियो। क्यान्सर भएपछि तुरुन्तै ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइन्। क्यान्सर भएको स्तन झिकेर ६ ‘साइकल’ केमो दिएपछि ठीक भइन्। अहिले पूरानै जीवनशैलीमा फर्किसकेकी छिन्। भन्छिन्, ‘मेरो कार्यशैली र बोलीव्यवहार हेरेर मान्छेहरु भर्खरै क्यान्सर जितेकी मान्छे
कपडाका मास्कले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म धुलोधुवाँ छेक्दैन
Naya Pusta August 23, 2016 August 23, 2016 पदेश नम्बर ३, ब्लग
काठमाडौं, ७ भदौ : राजधानीमा वायु प्रदुषणबाट बच्न प्रयोग हुने कपडाका मास्कले धुलो र धुँवाको कण छेक्नै नसक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग भइसकेका मास्कको प्रयोगशाला परीक्षणसहित गरिएको अध्ययनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रदुषणका कण छिर्ने गरेको पत्ता लागेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। अमेरिकाको मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचार्ड
जीवन थापा र जोया बारे खुल्यो थप नयाँ रहस्य !
Naya Pusta August 22, 2016 पदेश नम्बर ३, ब्लग
फेसबुक लगायत अनलाइन मिडियामा छाएका जोया र जिबन थापाको सम्बन्ध र जीवन थापालाई लागाईएको आरोपहरु मिडियाहरुले फैलाईएको अफबाह मात्र रहेको पुस्टि भएको छ । उनीहरुको समाचार ब्यापक भए पनि जिबन थापाको बारेमा प्रष्ट विवरण भने आएका थिएन । यस बारे खोज तलाश गर्दै जादा जिबन थापाको पुरा नाम जीवन थापा
यसरी खुल्यो सामान्य मानिसले सोच्नै नसक्ने एउटा भयावह हत्याकान्डको रहस्य : आफ्नै आमाको हत्या
Naya Pusta August 21, 2016 पदेश नम्बर ६, ब्लग, समाचार
काठमाडौँ : 'मेरी आमा देखिनुभएको छैन, तपाईँले कतै देख्नुभयो कि?' बुद्धिबहादुर खत्री गाउँमा यसो भन्दै आमा हराएको सोधीखोजी गर्दै थिए। गाउँले छक्क परेका थिए। एक दिनअघिसम्म घरमै देखिएकी ६५ वर्षकी देउती खत्री आखिर गइन् कहाँ ? छोरा फेरि हरायो भन्दै गाउँमा हल्लामात्रै गर्दै हिँड्ने। प्रहरीमा उजुरी चाहिँ नगर्ने। गाउँलेले बुद्धिबहादुरलाई प्रहरीकहाँ उजुरी